Usarega Yako Drip Campaign Ive Chinese Mvura Kutambudza | Martech Zone
Muvhuro, March 15, 2010 Svondo, October 4, 2015 Lorraine Bhora
Imwe yemaitiro anoshanda kwazvo kufambisa Random Vatorwa kuRaving Fans ndeye kushandisa "drip mushandirapamwe". Mukuita uku unosarudza boka rakasarudzwa revanhu vanokodzera huwandu hwevanhu, kana zvirinani zvakadaro, vagovana zvido zvakafanana uye uvatumire mameseji. Aya mameseji anogona kuve email, tsamba yezwi, mail yakananga, kana kutarisana.
Mushandirapamwe wechokwadi unopa ruzivo rwakanangana neako mutengi mutengi, inouya nguva dzose, asi isinganetsi nguva, uye inofambisa tarisiro kune yekutenga sarudzo.
Dzimwe nguva, zvakadaro, pamusoro pevanoda mabhizinesi varidzi kana vashambadzi vanoedza kumhanyisa maitiro, nekutumira yakawandisa ruzivo, nekukurumidza, kana kazhinji. Zvakaguma nei? Chaizvoizvo mhinduro inopesana, sezvo yako tarisiro isingotadzise chete kutenga, ivo vanokuudza kuti uende, zvachose!
Semushambadzi weemail, ini ndinowanzo kuve nemoyo murefu, asi munguva pfupi yapfuura, Ratepoint yakapedza kugamuchirwa kwavo. Akazviita sei? Zvakanaka zvakatanga zvisina mhosva zvakakwana, ine kadhi repositi, email uye kupihwa kwekuyedza kwemahara. Kwakazova nekufona panguva yandaibvunza mibvunzo mishoma. Kukurukurirana kusati kwapera ndakavaudza kuti ndaisakwanisa kushandisa chigadzirwa chavo nekuti ndaive mutengesi Constant Contact uye chavo chaisave chikonzero chakamanikidza kuti ndichinje.
Panzvimbo pekutora zvine hunhu kwete, vakandiendesa muboka rakasiyana zvachose uye ndakave tarisiro. Paive nemamwe maposadhi, mamwe maemail uye mamwe mafoni. Sezvo kutengesa kwavo vanhu kwave kuwedzera kunetsa, vachida kuziva kuti sei ndisina kumisikidza kutongwa kwangu, ndakaona zvakaoma uye zvakanyanya kuramba ndine hunhu. (Ngatizvitarisei, ndinobva kuNY uye pazuva rakanaka zvinandiomera kuramba ndakadzikama)
Dai ndaizombofunga kuyedza chigadzirwa chavo, ini handifunge kuti ikozvino. Tinodzidzei? Kunyanya kushambadzira hachisi chinhu chakanaka. Kana mumwe munhu achiratidza kuti havasi tarisiro, ngavasarudze, voenderera mberi. Mvura inogona kukonzeresa makomo, kudonha kamwechete panguva, asi hazvitendese munhu kutenga.
Tags: donhakudonha mushandirapamweEmail Marketingmarketing automation
Kutaurirana Nzira Yako Kubudirira
Lorraine, tsamba yako yakaita kuti ndifunge nezvemubvunzo wandanga ndichifungisisa nguva pfupi yadarika. Ndeipi nguva yakanaka (pakati pemeseji) yekushandisa yeemail DRIP mushandirapamwe? Kunyanya kana iwe uine ruzivo rwakawanda rwezvidzidzo rwekupa. Mazuva maviri? Mazuva matatu? Svondo?
Mubvunzo wakanaka Patric,
Ini ndinowanzo farira kusiya svondo pakati, asi zvinosiyana nechikamu, uye zvakare zvinonyorerwa nevashandisi vako.
Muenzaniso wakanaka yaive ProBlogger mazuva makumi matatu nematanhatu kubhurogira zvirinani. Icho chaive chirongwa chakakura. Ini ndakasaina ndichiziva kuti ndaizowana email pazuva re31 mazuva. Zvishoma zvaive zvakawandisa. Ndakawira kumashure, uye handina kuzombobata shure. Kunyangwe ndakachengeta ese maemail makumi matatu nematatu, ini handina kumbobvira ndapasa chidzidzo 31.
Mushure mekupinda muchirongwa chake, ndakafunga kupa vaverengi vangu nguva yakawanda. Pane zvakajairika kugadziridzwa, kukokwa kumisangano, ini ndawana kudonha chaiko kana ndikatumira anopfuura imwe chete vhiki mbiri kune vese asi iyo niche yakasimba kwazvo.
Ndingafarire kuziva izvo vamwe vanoona zvichivashandira.